Rahoviana no vonona hizara ny angon-drakitra ny mpanjifa? Ohatrinona ny angona? Raha mbola tsy tsapanao izany dia matetika i Eoropa no mitarika ny olana momba ny angona sy ny tsiambaratelo. Hentitra kokoa ny lalàn'izy ireo ary mitsikera kokoa izy ireo amin'ny fomba fisamborana data. Amerika Avaratra dia somary mitaredretra kely ary manana toe-tsaina laissez-faire betsaka kokoa isika - matetika manangona be loatra ary tsy dia mahavita azy loatra. Vonona ny hizara vaovao ny mpanjifa
Alakamisy Janoary 17, 2013 Sabotsy, Janoary 14, 2017 Douglas Karr
2013 dia mety ho taonan'ny Big Data… ianao hahita bebe kokoa adihevitra bebe kokoa eto Martech Zone amin'ny fitaovana hahitana, hitantanana ary hampiasa tahiry be dia be. Androany, Neolane sy ny Direct Marketing Association (DMA) dia namoaka tatitra maimaimpoana mitondra ny lohateny hoe, Big Data: Fiantraikany amin'ny fikambanana marketing. Ny fikarohana lehibe momba ny tatitra dia zaraina amin'ity infographic ity. Hitan'ny tatitra fa ny ankamaroan'ny sampana marketing dia tsy ampy fitaovana hikirakira ny fitomboana